Wafdi beesha caalamka ka socday oo la kulmay Axmed Madoobe - BBC News Somali
Wafdi beesha caalamka ka socday oo la kulmay Axmed Madoobe
Magaalada Kismaayo waxaa ka socota qaban qaabada doorashada madaxweynaha oo guddiga ay sheegeen in ay dhicidoonto 19-ka bishan oo ah isniinta soo socota.
Doorashada waa mid la isku khilaafsan yahay iyadoo musharrixiinta la baxay isbedel doonka ay diidan yihiin sida uu u socdo hannaanka.
Iyadoo khilaafkaas uu jiro ayaa Kismaayo lagu dhaariyay baarlamaanka cusub ee Jubbaland, taas waxaa xigay baarlamaan ay soo saareen guddi ay dhisteen musharrixiinta mucaaradka ah.
Madaxda beesha caalamka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa isku deyaya in ay xal u helaan khilaafka taagan. Balse macadda nooca uu yahay xalka ay raadinayaan.
Wafdi uu hor kacayay wakiilka xoghayaha guud ee Soomaaliya, James Swan oo uu wehliyay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Francisco Madeira ayaa maanta kismaayo gaaray waxayna la kulmeen madaxweynaha Jubbaland.
Sida lagu soo xigtay maamulka Jubbaland, James Swan ayaa Axmed Madoobe kala hadlay "in musharrixiinta mucaaradka loo ogolaado in ay isdiiwaangeliyaan iyo in shuruudaha lagu xiray wax laga badalo".
"Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa xubnahan ka socday Beesha Caalamka u sheegay in uusan asagu sharciyad u laheyn wax ka badalka jadwalka doorashada ayna tahay shaqada guddiga xuduudaha iyo doorashooyinkana", ayaa laga soo xigtay madaxtooyada Jubbaland.
Maxamed Nuur Caalin oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in"arrinta ay sii murjineyso xaaladdihii horey u jiray ee haa in qabaailada Soomaaliya ay siyaasadda ku qeybsan yihii".
Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan "guddi doorasho" oo taabacsan musharixiinta qaar ee dhaliishan sida uu hannaanka doorashada uu u socdo, waana halka ay guddiga kaga dhawaaqeen.
Image caption Wafdiga beesha caalamka ee gaaray Kismaayo
Haddaba, guddoomiyaha guddigaas Axmed Aabi wuxuu BBC Somali u sheegay in ay "golaha isbeddel doonka ah oo ay ka mideysan yihiin odayaasha dhaqabka ee Jubbaland ee soo jireenka ah inta badan siyaasiyiinta, waxgaradka iyo aqoonyahanka, culimaaudiinka iyo ururrada haweenka."
"Tababarro ka dib oo la xiriira si xildhibaannada loo soo xulayo oo caddaalad ah, liiska ayey noo soo gudbiyeen, iyaga oo ikhtiyaarkooda ku soo qoray anagoon cidna ku xujeynin, sidaasaan marka saaka ku iclaaminay," Ayuu yiri.
Maxamed Nuur Caalin ayaa sheegay in tallaabada musharrixiintu aysan "waafaqsaneyn warqaddii beesha caalamka ee ahayd in l caddeeyo guddiyada iyo odayaasha".
"Waxay iila muuqataa in daoorashadu ay u dhicidoonto sida ay u qorteen guddiga doorashada ee Jubaland", ayuu hadalka ku siidaray Caalin oo arrimaha Soomaaliya ka faalooda.
"Wasaaraddu waxa ay caddaynaysaa in aan la aqoonsan karin natiijada kasoo baxda doorasho baal marsan qodobbada dastuurka iyadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka," ayaa lagu yiri warka qoraalka ah.
" Run ahaanti arrintaas waa arrin aan aad uga xumahay, arrintaasi oo kalana waxaa weeyaan I jiid aan ku jiidee, anigu waxaan odhan lahaa maadama ay guddiga doorashooyinka Jubbaland ay iyagu xildhibaanno soo doorteen ayagana howsha loo xilsaaray waa iney ku raacaan musharrixiinta kale oo ay calafkoodana ka qaadaan. Laakiin, inuu midba midka kale wax ku tuuro wax caqli gal ah ma aha baan leeyahay" ayey tiri Xamda Maxamed Faarax oo gobdheer Somaliland joogta.
" Labada dhinacba waxaan dhihi lahaa Jubbaland oo laba loo qaybiyo wax dan oo ku jirto malahan doorashada Jubbalnd iney maamushana cid kale oo aad ka sugeysaan ma lahan, guddiga doorashadana kalsooni buuxda ku qaba. Dhinac madaxweynaha xilkiisa sii dhammaanaya Axmed Madoobe waxaa looga baahan yahay inuu musharrixiinta cabburin oo loollankooda ay magaalada ugu soo bandhigtaan si ay Jubbaland doorasha xor oo xalaal ah ay uga dhacdo" ayuu yri C/casiis C/llaahi Mukhtaar oo Baydhaba jooga.
"Waxaan u arkaa khilaafka cusub ee soo food saaray Jubbalanad ee ku saabsan ku dhawaaqidda xildhibaannada baarlamaanka anigu waxaan u arkaa in baarlamaanka xalay lagu dhawaaqay uu yahay baarlamaanka sharciga ah isla-markaana uu yahay baarlamaanki jubbaland hoggaamin lahaa afarta sana ee soo socota. Qolyaha mucaaradka ee baarlamaanka cusub magacaabay waxaan ugu baaqi lahaa iney u tanssulaan umadda haddii kale ay si fiican uga qayb qaataan maamul udhisidda degaankaasi" ayuu yiri Siddiiq Aadan Xiddig oo jooga Cabuudwaaqa.
Maqal Wasiirka amniga ee Jubaland ayaa ka hadlay maleeshiyo gobolka Gedo oo ciidanka la dagaalamay